म दुई युवकसँग एकसाथ प्रेम गर्छु तर विवाह कोसँग गरुँ ? « Janata Samachar
म दुई युवकसँग एकसाथ प्रेम गर्छु तर विवाह कोसँग गरुँ ?
प्रकाशित मिति : चैत्र ७, २०७७ शनिबार
काठमाडौं । समाज जति आधुनिक बन्दै गएको छ, उति नै जटिल पनि ।
समाजको खुलापनसँगै प्रेम र सम्बन्धको परम्परागत सोंच र महत्वमै परिवर्तन हुँदै गएको छ । यसले गर्दा विभिन्न अपराधहरु पनि बढ्दै गएको छ । अहिले नेपाली समाजमा प्रेम र सम्बन्धमा देखिने गरेका समस्याहरु तलका दुई प्रतिनिधि घटनाहरुले उजागार गर्दछ :
म दुई युवकसँग प्रेम गर्छु, कोसँग विवाह गरौँ कोसँग नगरौँ ?
म एक युवकलाई धेरै माया गर्थेँ र उसले पनि मलाई उति नै चाहन्थ्यो । तर केही कारणबस दुई वर्षसम्म हाम्रो बोलचाल हुन सकेन । तर पनि हामी एकअर्कालाई बिर्सन सकेका थिएनौँ । अर्को एक युवकले पनि मलाई दुई वर्षदेखि माया गथ्र्यो । बिस्तारै म पनि मनमनै उसलाई चाहन थालेँ । तर उसलाई मेरो पहिलो प्रेम जतिकै चाहेको भने थिइनँ । यो युवकसँग मेरो परिवार पनि मेरो विवाह गरिदिन तयार छ ।
तर जब हाम्रो विवाहको टुङ्गो लाग्यो तब पहिलेको प्रेमी पुनः मेरो जिन्दगीमा आयो । म उसलाई अझै पनि उतिनै माया गर्छु । अब उसले पनि मसँग विवाह गर्न भनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा म के गरौँ ?
मभन्दा जेठी युवती मनपराउछु तर उसले अर्कैसँग विवाह गर्दैछ । म के गरुँ ?
म १९ वर्षको छु र एक २१ वर्षकी युवतीलाई म धेरै माया गर्छु । तर ती युवती अरु कसैलाई चाहन्छे र उनीहरुको विवाह पनि हुनेवाला छ । यो कुराले म धेरै चिन्तित छु । अब म के गरौँ ?
पहिलो समस्याको जवाफमा मनोविज्ञको जवाफ यस्तो छ :
वास्तवमा तपाई दुवै जनालाई धोका दिइरहनुभएको छ । जुन कारणले गर्दा तपाईको पहिलो प्रेमीसँग मनमुटाव भएको थियो र दुई वर्षसम्म कुरा भएन । फेरि त्यहि कारण उत्पन्न हुन सक्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ र ? यस्तोमा सोचविचार गरेर मात्र निर्णय लिनु राम्रो हुन्छ । किनभने प्रेम,विवाह र सम्बन्ध कुनै खेलौना होइन । तपाई आफैं निर्णय लिन सक्नुहुन्न भने परिवारसँग यसबारेमा जरुर कुरा गर्नुस् ।
त्यसैगरी दोस्रो समस्या को जवाफ :
हुन त प्रेमका लागि निश्चित उमेर,वर्ग वा वर्ण हुँदैन । तर जहाँसम्म तपाईको सवाल छ त्यो केटीलाई बिर्सनुमा नै तपाईको भलाइ छ । जब त्यो केटी तपाईलाई चाहँदिन र अरु कोहीसँग विवाह गर्न लागेकी छ भने यो एकतर्फी प्रेम हो ।
जब कोही केटीले तपाईलाई मनदेखि चाहन्छे भने ऊ तपाईसँग आफैँ आउँछे र विवाह पनि गर्छे । त्यसैले अरुलाई मन पराउने र अरुसँगै विवाह गर्न चाहनेको लागि आफूले मरिहत्ते गरेर आफैँलाई पीडा दिनु बुद्दिमानी होइन ।